Kombiyuutarka Ganacsi ee ugu fiican iyo Nidaamka | Barnaamijka Forex - FXCC
dhufto ee Trading
Waxaad ka filan kartaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha hormoodka u ah ECN-STP inay ku siiyaan naqshadaynta ugu dambeysa, jarista,
iyo FXCC marnaba niyad jabin. Macaamiishayadu waxay heli karaan suuqyada FX ee dhammaan qalabka la doorbiday; muraayadaha, kiniinnada, laptops,
Kombuyuutarrada iyo adoo isticmaalaya adeegyo fog. Saaxiibkayaga aan u doorannay helitaanka suuqyada waa MetaQuotes Software Corporation,
creators iyo horumariyayaasha caalamka caan ah, abaalmarin abaalmarinta iyo ugu caansan ganacsiga FX ganacsiga waxaa jira, MetaTrader 4.
MetaTrader 4 waa taxane taxane ah oo loogu talagalay Shirkadda MetaQuotes Software. MetaQuotes Software Corp. waa shirkad horumarineed oo software kaas oo bilaabay inuu ganacsi ku sameeyo 2000. Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay samaysay sumcad aan la isku halleyn karin waxayna ku riyaaqday guushii weyneyd ee horumarinta iyo bixinta socodsiin cusub oo ganacsi, macaamiisha, adeegyo iyo xalal arimaha suuqa.
Heerarka kakanaanta iyo ganacsatada ganacsiyadu waxay horumarin karaan si ay ugu habboonaadaan qaabadooda ganacsiga iyo rabitaanka, iyada oo la adeegsanayo qaababka iyo faa'iidooyinka badan ee laga heli karo mareegaha MetaTrader, ayaa weli lagama maarmaanka u ah warshadaha. Si kastaba ha noqotee, ganacsatada cusub iyo kuwa aan khibradda lahayn, platformyadu si cajiib ah ayey u yihiin: user user friendly, fudud oo toos ah si loo isticmaalo.
Haddii aad tahay qof ganacsade ah oo waqti gaaban raadinaya in aad sare u qaaddo fursaddaada iyo fursadda guusha, ama aad tixgeliso naftaada xirfad buuxda, oo doonaya in aad isticmaasho: xafiis khaas ah oo khaas ah ama adeegso farsamooyinka ganacsiga algorithmic si ay u galaan suuqyada marxaladaha iftiinka, MetaTrader wuxuu leeyahay xal sax ah. Waxaa intaa dheer, iyada oo loo marayo FXCC waxaad sidoo kale ku haysataa si toos ah iyada oo loo marayo ka shaqeynta ma jirto faragelinta macaamil ganacsi, iyada oo la adeegsanayo ballanqaadka bixiyeyaasha xisaabta iyadoo loo marayo shabakadda ECN oo aan bixino. Xaqiijinta in bangiga dhexe uu soo xiganayo oo uu ku faafayo inaad hesho waa suuq-geyn dhab ah oo muujinaya xaaladaha hadda jira.
FXCC waxay bixisaa mashaariicda soo socda: MetaTrader 4, MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 multi terminal iyo MAM (maamulaha xisaabta badan).
Isku day mareegtayada!
Iyadoo ganacsatada MetaTrader 4 ay isticmaalayaan mid ka mid ah kuwa ugu caansan forex ganacsiyada ee adduunka. Kalsooni, xooggan iyo dib-u-dhac, mabaadi'da waxaa ku jira dhammaan qalabka lagama maarmaanka ganacsiga iyo sahayda si ganacsatada loo oggolaado: qabashada cilmi baarista iyo falanqaynta, galaan kana baxaan tiknoolajiyada oo isticmaalaan barnaamijka ganacsiga ganacsiga ee saddexaad oo ah mashruuc ganacsi, La-taliyayaal Takhasus leh (EAs). Haddii aad raadineysid inaad horay u sii wado dadweynaha iyo EA-yada ganacsi ee laga heli karo, MetaTrader ayaa sidoo kale soo riixday luuqadeeda barnaamijka u gaarka ah - MQL4, oo awood u siinaya ganacsatada in ay barnaamijyadooda u adeegsadaan robot-yada ganacsi ee is-gaddisan.
Download Now Wax dheeri ah baro Tusaha Isticmaalaha
Kufsiyada qalabka ugu ballaaran ee ganacsiga Forex.
The MetaTrader 4 Mobile App waa barnaamij si buuxda loo qaabeeyey oo dhamaystiran oo loogu talagalay qalabka gacanta ee Android iyo iPhone. Codsigan gaarka ah wuxuu u ogolaanayaa ganacsadaha in ay ka doortaan boqolaal shirkado arxan-darro ah oo u tartamaya ganacsatada ganacsiga. Barnaamijku wuxuu bixiyaa ganacsade kasta oo u baahan in la helo ganacsiga guuleysta ee Forex. Waxaa lagu dhajiyay meelihii waa: amar dhammeystiran oo amarro ah, taariikhda ganacsiga, jaantusyada isdhexgalka, farsamooyinka farsamada iyo xulashada ugu ballaaran ee qalabyada gacanta.
Ganacsatada isticmaalaya MetaTrader 4 Mobile App waxay ku raaxeeystaa awoodda ganacsi ee Forex ganacsiga markasta iyo meel kasta oo ku yaal meeraha. Maktabadda oo dhan ee falanqaynta iyo fursadaha ganacsi ayaa loo heli karaa qalab mobile.
Ganacsiga Mobile ee MetaTrader 4
Xakamaynta koontada ganacsiga
Ganacsiga meel kasta oo 24 / 5
Dhamaan noocyada kala duwan iyo hababka fulinta
Astaamaha calaamadaha interactive
Noocyada 3 ee jaantusyada: baararka, laydhka Japan iyo layn jabsan
Saacadaha 9: laga bilaabo hal daqiiqo ilaa hal bil
30 ee tilmaamayaasha farsamada caanka ah
Qalabka falanqaynta 23
Wararka suuqyada maaliyadeed
Taleefoon bilaash ah iyo email
KaalayGoogle Play on Availableapp Store Wax dheeri ah baro Tusaha Isticmaalka Android Tusaha Isticmaalka Macluumaadka iOS
Waxaa la bilaabay 2006, MetaTrader 4 MultiTerminal waa mid hadda la ixtiraamo oo la qadariyo ee MetaTrader 4 Online Trading Online. MultiTerminal waxaa loogu talagalay maaraynta isku duubnaanta koontooyin badan. Tani waa xarun aad u qiimo badan oo loogu talagalay kuwa maamula dhaqaalaha, ama kuwa maamula xisaabtamayaasha xisaabaadka iyo ganacsatada oo la shaqeynaya xisaab fara badan.
MT4 MultiTerminal waxay ku guuleysteen hawlaha ugu waawayn ee suuqa oo isku daraya ganacsiyo wax ku ool ah oo xisaabin badan iyo faa'iido leh. Interface barnaamijka wuxuu la mid yahay kan macaamiisha MetaTrader 4 Macaamiisha. Waa nidaam aad u fudud oo la taaban karo, in ganacsade kastaa uu yaqaano isticmaalka MetaTrader XIUMX Client Client, si sahal ah ayuu si fudud ula socon karaa.
MetaFX waxay bixisaa codsiga kombiyuutarrada ganacsiga ah ee loo yaqaan 'arjiga' MAM (Maamulaha Xisaabta ee Multi) loogu talagalay ganacsatada xirfadleyda ganacsiga ganacsiyada maalgalinta. MAM wuxuu u oggol yahay in uu la shaqeeyo qadar kasta oo xisaabeed lagu maareeyo, iyada oo la adeegsanayo hababka qoondaynta qotodheer, la shaqeynta La taliyeyaasha Khabiirada iyo wax kaloo badan. Qaar ka mid ah sifooyinka iyo faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Xidhiidhka Sidee Server wuxuu abuuraa deg deg deg ah
Codsiga Nidaamka Macmiilka ee Macmiilka loogu talagalay isbeddelka xawilaadda ganacsiga
Xisaabaadka ganacsiga aan xadidneyn
STP oo ku saabsan xisaabta miisaaniyadda ah ee fulinta amar baaxad leh, iyada oo si deg deg ah loogu qoondeeyo xisaabaadka hoose
"Amarro kooxeed" oo ka socota shaashadda kontoroolka Main
Qayb ahaan xiritaanka amarrada kumbuyuutarka fulinta
SL oo buuxa, TP & shaqeynta amarka joogtada ah
Sameeyaa Lataliyaha Xirfadlaha (EA) ee ganacsiyada maareynta xisaabaadka macaamiisha
Waxay u ogolaataa calaamadaha ganacsiga ee lagu iibiyo mashiinka MT (qalab gaar ah)
Koontada Koontada ee kasta waxay leedahay wax soo saarka warbixinta
Maareynta Amar Socda ee MAM oo ay ku jiraan P & L